I-Wifislax64: I-distro ekahle yokuphepha kumanethiwekhi e-WiFi | Kusuka kuLinux
Ngiyaqiniseka ukuthi iningi labafundi beDesdeLinux bezwile ngalo I-Wifislax64 nokuthi abanye abanye ngochwepheshe beqiniso abasebenzisa le distro eklanyelwe ngokuyinhloko ukwenza ukuhlolwa kwamanethiwekhi e-Wi-Fi kepha ingasetshenziswa kwezinye izindawo eziningi zokuphepha kwekhompyutha.
Le distro incanyelwa abasebenzisi abafuna ukuba ne-inthanethi yamahhala, ngoba inenqwaba yezinhlelo zokusebenza ezikuvumela ukuthi uxhume ngokuzenzakalela ukuze ukhulule amanethiwekhi we-Wi-Fi futhi futhi ifike ifakwe izinhlelo ezizokuvumela ukuthi wephule ukuphepha kwamanethiwekhi we-Wi-Fi ayimfihlo.
Isibopho sokugcinwa nokuvuselelwa kwale distro sivela esandleni seqembu elenziwe ngochwepheshe bezokuphepha abanemvelaphi ekhuluma iSpanishi, ehlukaniswe ngamaqembu asebenzayo ukuze kuthuthukiswe imibhalo evumela ukwenza izinqubo zokucwaninga amabhuku bese kuthi lawo maqembu athi baphethe ukuhlola nokuqinisekisa ubuqotho bamathuluzi afakwa ku-suite.
I-Wifislax64-1.1-final: Uhlobo lwakamuva luyatholakala
Uhlobo lwakamuva olutholakalayo lwalesi siprofetho sokuphepha kwenethiwekhi ye-WiFi inguqulo ye-wifislax64 1.1, Kungumphumela wokusebenza kanzima ngaphezu kwezinyanga eziyi-7 lapho inhloso yokwenza ngcono ukusebenza kwe-distro, engeza izicelo ezintsha futhi ngaphezu kwakho konke ukulungisa ezinye izimbungulu ezibikwe ngumphakathi ukuthi sezihlule.
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi zonke izinhlobo ze-Wifislax manje zingama-64-bit, le nguqulo yakamuva yakhiwe ngokuya ngamaphakeji we I-slackware64-14.2 Kubuyekezwe, ngokutholakala kwama-desktops e-XFCE ne-KDE, ngaphezu kokuhlonyiswa nge-4.9.40 kernel evela egatsheni le-4.9 LTS, ukuxhaswa kwe-UEFI kanye ne-Secure boot.
I-distro inezindlela eziningi zokuqalisa lapho kubonakala khona ukwenziwa bukhoma, okuncediswa ukwenziwa ngemodi yombhalo, kwimodi yokuqhafaza yeVesa nokwenza ngokukopisha kwi-RAM. Isifaki sayo esinamandla sisinikeza amathuba amaningi futhi sisiqondise kuyo yonke indlela yokwenza kanye / noma yokufaka.
Izici eziphansi ezinconyelwe ukwenziwa kwale distro ngu Ama-megabyte angama-512 enqama okusetshenziswa kumodi ebukhoma kanye ne-1 gig yokufaka, kanye nokwahlukanisa ext4 okungenani ama-gigs ayi-10.
Inombolo enkulu yezinhlelo zokusebenza efakwe ngokuzenzakalela kule distro, phakathi kwayo okukhona:
Zonke lezi zinhlelo zisatshalaliswa ngemenyu ebanzi futhi ehlelekile, lapho isigaba se-wifislax sihlanganisa zonke izinhlelo zokucwaninga amanethiwekhi we-Wi-Fi kanye nezinye izinhlelo ezifakwe ezigabeni zazo.
Ithimba le-Wifislax linikeze amathuba alandelayo okulandwa:
Sicela ulande bese ubeka isithombe se-iso kudrayivu ebhuthayo ukuze uqale ukujabulela i-distro elula futhi esheshayo enezinhlobonhlobo zezicelo zokucwaningwa kwenethiwekhi nendawo yonke yokuphepha kwekhompyutha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Wifislax64: I-distro ekahle yokuphepha kumanethiwekhi e-WiFi
Kuthatha isikhathi esingakanani ukwephula iphasiwedi ye-WPA2 yezinhlamvu ezingaphezu kwezingu-10 ze-alphanumeric? ...
Kuya ngamandla akho wekhompyutha, kepha mhlawumbe kuningi, imvamisa kulokhu kunezindlela ezingcono kunamandla amakhulu, enye ukushaya i-wps uma inikwe amandla kanti enye efika engqondweni ngobunjiniyela bezenhlalo, ngokwesibonelo uphakamisa i-ap Ngegama elifanayo nezindlela zokuzilimaza kumsebenzisi, lapho umsebenzisi exhuma kuhlelo lwakho lokusebenza umcela ngekhasi ukuthi afake kabusha iphasiwedi yakhe ye-wifi. Kunamathuluzi ambalwa enza lokhu konke kube okuzenzakalelayo okuhle.
U-Amir torrez kusho
Ngicabanga ukuthi omunye nguLinset.
Phendula u-Amir Torrez
Ngiyafisa ukwazi .. ngabe izinhlelo zokusebenza ezinjengeSlowDNS ezithembisa i-inthanethi yamahhala ngaphandle kwedatha zisebenza kanjani? Ngifunde kancane futhi kunemininingwane eminingi yokuthi ungayenza kanjani isebenze kepha hhayi ukuthi uyithola kanjani
Ngabe ingasetshenziswa njenge bukhoma noma kufanele uyifake ukuze uyisebenzise kahle?
Igama * Pedro Torres kusho
Ngakusebenzisa njengokubukhoma. Manje ngiyifakile. Ngakho-ke, womabili alungile. Ozithobayo.
Phendula ku Igama * Pedro Torres
Kuyathakazelisa, ake sizame ...
Ukwenzela nje imininingwane: kukhona ibhulogi, ezinikele ekukopisheni nasekwenzeni umsebenzi wabanye kube owabo. Okukhulu kunakho konke futhi okuwukuphela kwento ukukopisha okuqukethwe, kwenze kube okwakho, ngokwesibonelo ngokuhlela izithombe bese ugcwalisa ikhasi ngokukhangisa ukuthola izinzuzo zezomnotho.
Phakathi kwezinto azikopayo yile blog. Isibonelo:
Manje kubonakala sengathi, "umlobi" ukhathazeka ngokuthi abamfaki ... bezama ukuvimbela ukukopisha kulokho akukopelayo.
Kubukeka sengathi awukwazanga ukuvimba isixhumanisi ukuthi singaveli https://www.blogger.com/go/report-abuse kusuka kuGoogle 😉
Ngiyabonga kakhulu ngombiko wakho mngani